8 Su'aalaha Inta badan-weydiiyay kaabta Samsung Kies
1 Dooro Alternative
2 Dooro 2,6
3 Dooro 3
4 Dooro Mini
6 Kies aan shaqayn
7 Kies u PC
9 Kies u Mac
10 Select Download
11 Dooro Driver
12 Reviews Select
14 Dooro Update
15 uninstall Dooro
16 Select kaabta
17 Select Transfer
Waxaa jiri kara sababo xad-dhaaf ah ka dambeeya gaartay shil xogta ku saabsan Samsung telefoonka ama kiniin ah, si la abuuro gurmad ah ayaa noqday mid ka mid ah waxyaabaha daruuriyaadka ah. Si aad ku raaxaysateen, software syncing xirfad yaqaan Samsung Kies waxa loo isticmaalaa maamulka file on telefoonada iyo kiniiniyada kala duwan Samsung. Mid ka mid ah waxyaabaha muuqda ee ay yahay gurmad iyo soo celinta feature. Waxaa aad u ogolaanaya in ay gurmad aad telefoon ama qalab lagu kaydiyo Samsung aad kombuutarka oo soo celin karaa files si ay u qalab aad isticmaalaya gurmad ah hal dhibic qaarkood sida iyo marka loo baahdo. Maqaalkani waxa uu dhibta doonaa su'aalo kala duwan oo aad halka ilaa taageero iyo soo celinta xog Samsung qalab ayaa la weydiin laga yaabaa in Samsung Kies 3 .
Fiiro gaar ah: Maqaalkani waxa uu inta badan diiradda saarayaa su'aalaha ugu-weydiiyo oo ku saabsan Samsung Kies khaladaad 3 gurmad. Haddii aad isticmaalayso Samsung Kies iyo wax dhibaato ah, fadlan riix halkan .
Q1: Sidee ayaan qalab aan ku xidhmaan Kies 3?
Your qalab Samsung ayaa loogu xidhi karaa your computer iyadoo la isticmaalayo xogta USB joogto ah cable yimid xirmo marka aad soo iibsatay qalab aad. Raac tallaabooyinka fudud in ay ku xidhmaan qalab aad si Kies 3.
Tallaabada 1. Connect darafkiisan cable xogta si aad qalab Samsung iyo darafkiisa kale inta dekedda your computer ee USB.
Tallaabada 2. Sida ugu dhakhsaha badan aad qalab Samsung xiran yahay si aad u computer, ugu dambaysta si toos ah rakibi doonaa darawalka qalab socon.
Fiiro gaar ah: Haddii wadaha qalab aan la rakibay si toos ah, waxaad u baahan kartaa in la raaco hab buugga. Tag website saaraha aad wax soo saarka ee ay ka, in ay taasi dhacdo goobta Support Samsung, oo markaas aad u hesho " Support . " Riix Eeg dhan downloads iyo soo bixi darawalka ku habboon .
Tallaabada 3. Hadda furo software Kies 3. Waxaa ka dhigi doonaa xiriir si aad qalab Samsung ahaantiisa iyo muujiyaan screen taas ka dib.
Q2: Maxaan gurmad awoodo iyo soo celinta ka qalab aan iyadoo la isticmaalayo Kies 3?
Waxaad u abuuri kartaa raad raac ah oo xiriiro , abuse wac, videos, sawiro, fariimaha, Deymaha maqan, macluumaadka xisaab email, ringtones, files kale iyo wax ka badan. Waxaad ka arki kartaa liis dhamaystiran oo ka kooban ilaa in la taageeray karaa iyadoo la isticmaalayo Kies 3 furmo suuqa ku soo bixi doona marka aad guji kaabta / Celinta tab.
Q3: Sidee ayaan u gurmad qalab aan iyadoo la isticmaalayo Kies 3?
Tallaabada 1. Ka dib isku xira qalab aad si aad PC, ogaato iyo furan Kies 3 software.
Tallaabada 2. Open Back up / Celinta tab. Waxaa furi doonaa liiska ka kooban in aad awoodo gurmad.
Tallaabada 3. Riix kaabta Data haddii baahidu timaaddo. Hadda ka fiiri sanduuq ku ag nooca content aad rabto in aad dib u up. Haddii aad rabto in aad wax walba in la xoojiyaa, guji dhammaan waxyaabaha Select dusheeda.
Tallaabada 4. Ka dib doorashada, riix kaabta button.
Tallaabada 4. menu gujisid A muuqan doonaa taariikhda, waqtiga, iyo waxa ku jira gurmad ah. Riix Buuxi dhammayn gurmad la Samsung Kies.
Q4: Sidee ayaan u soo celiyo aan la isticmaalayo qalab Kies 3?
Tallaabada 2. Open Back up / Celinta tab.
3. Riix Tallaabada Soo Celinta Data .
Tallaabada 5. Ka dib markii xulashada content aad rabto inuu ka soo kabsado file gurmad ah, guji soo celi .
Tallaabada 6. Riix Buuxi dhammayn nidaamka.
Q5: Maxaan sameeyaa haddii Kies 3 aan qalab aan arkaya?
Xusuusnow in Kies 3 ma taageeri dhamaan noocyada qalabka. Waxa ay taageertaa qalabka Samsung Galaxy isagoo ah Android 4.3 version ama ka dib. Waxaa sidoo kale loogu talagalay dadka isticmaala Mac. Haddii aad u hubiso in qalab aad waxaa taageera Kies 3 iyo ka hor inta aadan isticmaali leh qalab la mid ah, markaas waa in aad qabato waxan soo socda jeeg fudud oo la xidhiidha guul ka hor aad u guurto Kies 3 xiriir troubleshooter.
Reconnect ah qalab iyo cable ah in aad damisid.
Dekedda ayaa computer aad isticmaalayso laga yaabaa in aan la shaqeeyo. Isku day inaad isku xira cable ee dekedda kale.
Isku day inaad isku xira cable si aad PC aan xarun USB ama saldhiga tabaneeyo.
Tag Information iyo hubiyo updates. Hubi in aad qabto nooca ugu dambeeya ee Kies 3.
Waxa kale oo aad isku dayi karaa ku dhow ka dibna dib codsiga.
Guuleysatey aad PC ama qalab aad ama labadaba.
Haddii mid ka mid ahaa doorashooyinka sare shaqeeyaan, ka dibna dhibaatada been ama darawalka qalabka ama codsiga laftiisa.
Si aad u cusboonaysiiso wadayaasha, waxaad isticmaali kartaa shaqo la xidhiidha dhib la heli karo oo kaliya in Kies 3 Windows.
Tallaabada 1. Click on Kies 3 si aad u furto.
Tallaabada 2. Tag Tools dooro dib .
Tallaabada 3. Ka hor inta troubleshooter waxay ka bilaabantaa habka reinstalling ah, waxaa laga yaabaa in la siiyo digniin ah messages.Click Haa on oo dhan oo iyaga ka mid.
Tallaabada 4. Marka nidaamka reinstalling dhamaado, barkinta qalab aad ka dibna waxa ay ugu xidhmaan.
Dib Kies 3 (Windows):
Xitaa ka dib markii la xariirta wadayaasha, dhibaatadaada aan weli la xalin, waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aad uninstall codsiga ugu horeysay, ka dibna dib ugu dambeeyay ay version internet ka.
Uninstallation ee Kies 3:
Tallaabada 1. Start by goynta cable USB ka qalab aad.
Tallaabada 2. Fur web browser iyo abuurtaan Samsung Kies website-ka .
Tallaabada 3. Riix Download doorasho ee bogga guriga ka.
Tallaabada 4. Halkan waxa aad la siiyey doonaa fursadaha download ee Kies 3 iyo Kies 2.6. Tag ee ku aadan ikhtiyaarka Kies 3 ikhtiyaarka.
Tallaabada 5. Dooro Run doorasho marka download u dhameystiray.
Tallaabada 6. Marka impelled la fursadaha Kies 3 dib ama Kies 3 saar, tagto saar ikhtiyaarka.
Tallaabada 7. Dooro ikhtiyaarka Haa on checkbox ka muuqata. (Taasi soo socota si ay fursad u Delete ku meel gaar ah Save)
Tallaabada 8. Haddii tallaabooyinka soo sheegnay ay dhammaystirmaan, codsiga uu tirtiray.
S 6: Sidee ayaan u gudbiyaan xogta gurmad ka qalab ka samaysan saaruhu kale oo aan ahayn Samsung oo isticmaalaya Kies 3?
Waxaad ku wareejin kartaa xogta ka qalab kale si aad qalab Samsung oo isticmaalaya Kies 3. Si tan loo sameeyo, raac tallaabooyinka fudud ee hoose:
Tallaabada 1. Qalabka waa in la xiran your computer.
Tallaabada 2. Open codsiga Kies 3.
Tallaabada 3. Tag Tools .
Tallaabada 4. Riix xogta Transfer ka ah qalab aan Samsung .
Tallaabada 5. Dooro Samsung.
Tallaabada 6. Dooro mid kasta oo ka socda qalab Samsung non: Apple®, Nokia®, LG®, iyo Blackberry®.
Tallaabada 7. Waxaad dooran kartaa file u gurmad adigoo gujinaya Change . Dooro file ah oo guji Open .
Tallaabada 8. content ayaa ka dhex muuqan doonaa suuqa kala. Dooro content in la xoojiyaa, hubi Waxaan oggolahay iyo riix Start .
Tallaabada 9. Marka habka gurmad la dhammeeyo, guji oo dhamaystiran .
Q 7: Sidee ayaan u Qabtaan ah Emergency firmware Recovery, waayo, qalabka la isticmaalayo Kies 3?
Haddii aad casriyeeyo firmware ee qalab aad oo kaliya ku guuldareystay, ha argagixin. Waxaad soo noolayn kartaa qalab aad adigoo raacaya tallaabooyinkan fudud.
Tallaabada 1. Tools Open oo taga si kabashada firmware Degdegga ah
Tallaabada 2. Haddii qalab aad u baahan tahay dib u soo kabashada, ka dibna aad si xaqiiqo ah in magaceeda lagu liiska arki doonaa. Dooro qalabka iyo guji soo kabashada xaaladaha degdegga ah.
Tallaabada 3. Ogsoonow xeerka ku qoran hoose qalab aad. Tani waxaa loo isticmaali doonaa halka celinta waxaa loo sameeyaa ka kombiyuutarada kale.
Tallaabada 4.Put qalab aad u geliyey hab-kabashada iyo riix Start cusboonaynta.
Q8: Sidee ayaan u Qabtaan ah Emergency firmware Recovery, waayo, qalabka la isticmaalayo Kies 3 ka computer kale?
Haddii kabashada firmware deg deg ah uu ku guuldareystay iyadoo la isticmaalayo habka ku Su'aasha # 7, oo aad samayn kartaa adiga oo isticmaalaya computer kale. Si tan loo sameeyo:
Tallaabada 1. Click Tools .
Tallaabada 2. Dooro kabashada firmware degdegga ah ka dibna dib u soo kabashada Emergency isticmaalaya code dib u soo kabashada.
Tallaabada 3. Ka dib markii ay bedesheen qalab aad si hab-kabashada, Riix Start cusboonaynta .
Faylal ay kala soo wareegeen Nokia in Samsung
3 Hababka in Pictures Android kaabta
3 Tools in SMS Android kaabta
3 Hababka in Xiriirada Android kaabta
Photos Transfer, Music, Videos iyo More ka iPad in Samsung
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka BlackBerry in Samsung S4 / S3 / Note 3 / Fiiro 2
> Resource > Android > 8 Su'aalaha Inta badan-weydiiyay kaabta Samsung Kies